I-Apple ivusa uthotho lukaSteven Spielberg "Iimbali ezimangalisayo" Ndisuka mac
UIgnacio Sala | | Apple Music, Iimveliso ze-Apple
Ukuba uneminyaka embalwa ubudala, kusenokwenzeka ukuba uthotho lweeNdaba eziMangalisayo zivakala ziqhelekile kuwe. Amabali aMangalisayo, amaBali aMangalisayo ngesiNgesi, kunye neeNdaba eziMangalisayo kwiLatin America, yayiluthotho losasazo lwe-NBC phakathi kowe-1985 nowe-1987 phantsi kwentsimbi kaSteven Spielberg. Njengoko kuxeliwe yiWall Street Journal, UApple ufikelele kwisivumelwano nenkampani yemveliso yokuqala, Amblin Television kwaye NBC Universal ukuvusa uthotho lweeNtsomi ezimangalisayo, uthotho apho abanye babadlali abanempembelelo kunye nabalawuli kule minyaka idlulileyo basebenze. Okwangoku, ixesha lokuqala Iya kwenziwa ngeziqendu ezili-10 kwaye iya kuba nohlahlo-lwabiwo mali lwezigidi ezi-5 zeedola.
Abafana baseCupertino baceba ukutyala imali engaphezulu kwe- $ 1.000 yezigidigidi kumxholo wokuqala wesandi seNetflix, kwaye ixesha elitsha leeNdaba eziMangalisayo liya kuba sisiqalo esihle. Kwiminyaka edlulileyo kolu ngcelele lumnandi, Amabali aMangalisayo afumana uphononongo olukhulu wamvumela ukuba aphumelele amabhaso ama-5 e-Emmy Konyulo abalishumi elinesibini olwafumeneyo. Okwangoku kwaye ngelixa kungekho siqinisekiso sisesikweni, asazi ukuba uSteven Spielberg uzakuba ngasemva kwimveliso.
Ngokwendlela yokuZonwabisa yeVeki yeVeki, umvelisi olawulayo uya kuba nguBryan Fuller kunye noDarryl Frank noJastin Falvey. Omnye wemisebenzi yokugqibela kaBryan Fuller luthotho olumnandi lukaHannibal ukongeza kulungelelwaniso lwenoveli American Gods okwangoku idlala ngeAmazon Prime. UJennifer Salke, uMongameli we-NBC Enternainment uthi:
Kumnandi ukuphinda sidibane noogxa bethu uZack noJamie kwiiofisi ezintsha zeApple. Siyakuthanda ukuba kwindawo ephambili kutyalo-mali luka-Apple kwaye asinakucinga ngepropathi engcono kunaleyo ayithandayo u-Spielberg's 'Amazing Tales' franchise kunye nobukrelekrele uBryan Fuller.
Okwangoku asazi ukuba eli xesha lesithathu leeNdaba eziMangalisayo liza kufika nini kwiApple Music, apho iya kusasazwa kuphela, kodwa ngokuthathela ingqalelo ubungqingqwa buka-Apple malunga noku, sinokulinda ngokukhuselekileyo iminyaka embalwa kude kube kuthotho lubone ukukhanya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » I-Apple ivusa uthotho lukaSteven Spielberg "lweeNdaba eziMangalisayo"